Mackerel izakhiwo ewusizo okuzokwenziwa kuchaziwe ngezansi, umkhiqizo esihle ukupheka inhlanzi wesibili kanye nesobho, kanye imikhiqizo Semi-siphelile (cutlets, izinduku kanye nokunye.), Futhi baking (amakhekhe, ophaya nokunye okunjalo. D.). Kumele kuqashelwe ukuthi le isithako angaba namandla okuwunikela cishe zonke izakhamuzi zezwe lethu. Phela, kubiza akubizi (kusuka 80 kuya 140 ruble Russian ngamunye 1 kg).
Ngaphambi kokuba wena izakhiwo ewusizo mackerel fresh, kubalulekile ukutshela, ukuthi ngokuvamile ngemikhiqizo.
Igama elithi "mackerel" beza kithi kusukela Latin scomber. Lena inhlanzi okuqondene uhlobo lwe omkhaya Scombridae Perciformes kanye lamabutho. Ubude obukhulu - cm 60, kanti isilinganiso - 30. Isidumbu sakhe kuyinto othini lokuphotha emise embozwe izikali ezincane cycloid. Ngemuva mackerel has a lot of bands omnyama athe lwalugobile.
Yikuphi izakhi aqukethe?
Manje uyazi ukuthi kuyinto mackerel. izakhiwo awusizo kunqunywa ukubunjwa inyama yayo. Ngo isamba okunjalo enkulu izinhlanzi amafutha. Ngokuvamile 100 amagremu akhawunti abo kakhulu ngendlela 30%. Nokho, akuyona ethize zonke izinhlobo mackerel, kodwa kuphela ngenxa yalowo wabanjwa ebusika zindawo elinesimo sezulu elibuhlungu.
Uma izinhlanzi ubanjwe isizini ihlobo, e 100 amagremu kungenzeke iqukethe 13% kuphela amafutha. Nakuba leli nani kwanele ukuba baphathe mackerel fresh yesigaba okunamafutha kanye okunama-kilojoule amaningi izinhlanzi.
Yiziphi ezinye izici iqukethe mackerel? izakhiwo awusizo aziwa eziningi ukupheka wakhe. Lokhu ngokwengxenye exhunywe ne neqiniso lokuthi licishe 18% amaprotheni (100 igramu umkhiqizo). Futhi lesi sici amuncwa wumzimba angabacwasi ngokushesha (ngokushesha izikhathi 3 kuka amaprotheni inyama, efana yenkomo).
Mackerel iluhlaza noma ukushisa kabi vele iqukethe hhayi kuphela amaprotheni namafutha, kodwa futhi namaminerali. Lezi zihlanganisa lokhu okulandelayo: manganese, sodium, chlorine, isibabule, zinc, i-phosphorus, i-potassium ne-fluoride. Ngaphezu kwalokho, le nhlanzi has a mikrosoedineny inombolo edlala indima ebaluleke kakhulu ekusebenzeni umzimba womuntu.
Amavithamini mackerel futhi yavama. Ukwakheka kwalo chemical kuhlanganisa: lonke iqembu B amavithamini kanye vitamin PP.
Mackerel: izakhiwo ewusizo komkhiqizo
inhlanzi Kwethulwa kuletha umzimba womuntu compounds ukudla, futhi Akhuthaza ukwakheka kwe-hemoglobin futhi ukuvuza amaprotheni zamagama. Landzelela izakhi okuyizinto inyama mackerel, ngaphambili ukuhlanganyela ngenkuthalo ngcono umoya-mpilo zithutha various izitho zangaphakathi nezicubu.
Siyabonga nokubunjwa ocebile izinhlanzi kufanele uqinisekise ukuthi ufaka Ukudla yezingane. Ngoba iqoqo izakhi ivumela ingane ukuthuthukisa evamile futhi ukhule.
Mackerel, ogama izakhiwo ziye achazwe ngenhla, kumele khona ekudleni abesifazane abakhulelwe omama abasebasha webele. Lokhu kungenxa yokuthi kuyasiza ukuthuthukisa lactation.
Ngenxa okuqukethwe izinhlanzi acid amafutha unsaturated futhi kufanele kube impoqo ukusebenzisa kwabaswele ku ukusebenza evamile asebuchosheni nomgogodla. By the way, amaminerali namavithamini eziqukethwe mackerel, ziwusizo kakhulu isikhumba, izinzipho, nezinwele kanye nolwelwesi lwamafinyila.
Akunakwenzeka ukuba uqaphele yokuthi ukusetshenziswa njalo zezinhlanzi emelelwa umuntu uyakwazi kalula kulesetayelekile amazinga kashukela egazini. On umuthi okumnandi futhi obungajwayelekile abagcina of.
I mackerel namanje ewusizo?
Mackerel (eluhlaza, abelapha noma ukushisa kabi) iqukethe eziningi phosphorus. Futhi lesi sici ubelokhu wokwakha enzyme - izinjini eyinhloko yezinqubo zamakhemikhali emisipheni yomzimba womuntu. Ngaphezu kwalokho ngifuna ukusho ukuthi skeleton zethu cishe ngokuphelele sakhiwa zikasawoti. Kule ndaba, kutuswa ukusebenzisa ngokuvamile izingane ezisencane kakhulu nentsha.
Ngaphezu kwalokho, le nhlanzi kufanele kufakwe ekudleni kwabantu asebekhulile. Ngempela, eminyakeni umuntu uqale ngenkuthalo nezinkinga nge uhlelo zemisipha. Ngizothanda futhi ukuba uqaphele ukuthi mackerel iyasiza izifo ngokuhlanganyela. Phela namaminerali eziqukethwe inhlanzi, ukondla ithambo amaseli bese kusiza umzimba ukwakha uqwanga.
Njengoba ubona, wathi izinhlanzi iqukethe omningi izakhi. On izinzuzo zayo mayelana nomzimba womuntu akunakwenzeka ukuba umuntu uxabana. Nokho, kufanele kuphawulwe ukuthi, njenganoma iyiphi enye umkhiqizo, eliqukethe okuningi acid amafutha, amavithamini kanye abavukuzi, mackerel Ubuye Izimo ukusetshenziswa. Mayelana nabo sizokutshela manje.
Uma inhlanzi enjalo zifakwe emanzini, it acishe akanayo Izimo. Wenza okuhlukile ongakhonza kuphela labo bantu babe komzimba nezinto kolwandle futhi umfula imikhiqizo. Kepha usawoti noma mackerel ngibhema, ngeke ibe wusizo kubantu abane isifo senhliziyo kanye ezigulini unezinkinga wokugaya ukudla.
Kufanele futhi kuthiwe mackerel inhlanzi, izakhiwo ewusizo okuyizinto elingenakuphikwa, kuyingozi abantu abanezifo ezingamahlalakhona kwesibindi nezinso. Ngakho-ke, kufanele uqaphele.
Mackerel (izakhiwo ewusizo kanye contraindications ziye achazwe ngenhla) iwumkhiqizo ingeyanelisa kakhulu nokunomsoco. Kusukela yakhe kahle ukulungiselela isobho ahlukahlukene, nakuba ngokuvamile uwayehlalise Fry inhlanzi, futhi ukhonza ke etafuleni ngesimo burger ne izinhlanzi izinti. Yiqiniso, lihambisana dish side, mikhiqizo simnandi kakhulu futhi okunomsoco. Kodwa sincoma hhayi ukuze adalule izinhlanzi ukufudumeza ukwelashwa epanini ukuthosa emafutheni. Phela, mackerel futhi umkhiqizo ngakho amafutha kakhulu.
Uma usebenzisa i-le nhlanzi ufuna ukwenza i dish engavamile ke unikele ukupheka ikhekhe okumnandi okuzenzela. Ngenxa yale njongo ukuhlanzwa mackerel umucu iyasikwa ibe yizicucwana amancane bese ezixutshanisiwe ilayisi abilisiwe, futhi lisetshenziswa njengendlela ukugcwaliswa ngoba imvubelo esivutshelweyo inhlama.
Ngaphezu kwalokho, izinhlanzi wathi livame ukusetshenziswa salting nokubhema.
AmaCynic - Yini lokhu? umsunguli we School of the AmaCynic
"Iseluleki sika Okokuqala Rule": ukufunda noma ukubukela?